Mongoose ọ na-eme igwe kwụ otu ebe dị elu? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Mongoose zuru nkwusioru - azịza ohuru
Mongoose ọ na-eme igwe kwụ otu ebe dị elu?
Mongoose igwe kwụ otu ebea na-akọwakarị dịka otu n'ime ihe kachasị mma,elu-mma anyịnya igwe.Jenụwarị 17 2021
(egwu egwu egwu) (ozi ụda ozi) - Oh lee anya, ụmụ okorobịa na (Beep) nwere igwe ọhụrụ - Ka m chee. Ọ dị milimita ise n'ogologo na otu ogo looser, Kaz? - Ka ahụ; N'ezie isii millimeters ogologo - ọ bụ mkpari. Companieslọ ọrụ ndị a niile na-anwa igbochi mgbanwe anyị dị ka ndị ngagharị.
Naanị jiri ụkwụ abụọ banye. - Chere, ọbụghị ụdị a na - ekwu mgbe niile na igwe kwụ otu ebe na - arịwanye elu? toro ogologo ma kwa ukwu? - Kasị njọ, gịnị kpatara anyị ji egbusi oge anyị na oke ehi a, Kaz? M ga-ewu ihe enduro igwe kwụ otu ebe. Aga m eme ka ọ daa ukwu na ogologo.
Ọ ga-adị ka ọ si n’ọdịnihu. - 'chọrọ ka iru ihe enduro igwe kwụ otu ebe? Ee, m ga-achọ ịhụ nke ahụ. (Glockenspiel) - Dude, bụrụ onye ọka ikpe ịchọrọ ịbụ, dude. (oké obi uto) - remember na-echeta agadi nwoke na-arụ ọrụ maka Pinkbike? Afọ ole na ole gara aga? Ọ gara Taiwan ịhụ nke a - anyị ga-amalitekwa akara anyị na ya.
Yabụ kedu ihe nke ahụ ga-efu? - 250 - Nke ahụ bụ 250? - $ 250 - to ga-eburu nke ahụ n'uche. Ọ bụghị maka ịbịa igbe na akpa ego jupụtara ebe a wee sị, 'Wetanụ m igwe kwụ otu ebe.' - Ya mere, olee otu o siri sie ike, nri? ) (obi ụtọ Tekno egwu) Iji chọpụta otú ọgba tum tum ga-adị n’ime afọ iri, ihe ị ga-eme bụ ịlaghachi afọ iri ma tinye mgbanwe ahụ n’ihe anyị na-eji ugbu a.
Ọ dị mfe ná mgbakọ na mwepụ. (Obi ụtọ Tekno music) Ya mere ụbọchị ndị a, ọ dị mma, isi iri isii na itoolu. Ugbu a ha dị iri isii na atọ, ya mere n’ime afọ iri ha ga-abụ iri ise na asaa.
Kedu ihe kpatara ndị nzuzu ndị a anaghị ahụ nke a? kẹle ọ tọ dụdu iphe. Ọtụtụ ndị isi mmiri karama, ana m eche naanị na-eche banyere ya. (obi ụtọ Tekino obi ụtọ) Ee, dịkwa mma.
esi mountian igwe kwụ otu ebe
Ga Taiwan. (jazzy drum music) Mgbe awa iri na atọ gasịrị n'azụ ụgbọ elu ahụ, anọ m ebe a na Taiwan na-eme mkpọtụ okpukpu abụọ na Taipei Cycle Show. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme etiti ebe a bụ ebe ahụ, jupụtara na ndị mmadụ na ụlọ ọrụ.
Soro m n'ime ka anyị rụchaa ya. Chei, a Mike, kedu ka ị mere? - Abụ m Jamie. - Jamie - Ee. - Lee anya na nke a.
Kedu ihe ị chere nke ahụ? - Yabụ, ịchọrọ ịme igwe kwụ otu ebe a, ma ọ bụ - M ga-achọ ịme igwe kwụ otu ebe a.
Nke a bụ nrọ m. Kedu ihe ị chere? - Hmm
O yiri ka ọ dị iche. - Nke ahụ ọ bụ imewe gị? - Nke a bụ imewe m. Emere m nke a - echere m na ọ dịghị mma maka igwe kwụ otu ebe mgbe niile - Ọ dị mma, yabụ na ịchọrọ karama na ezé gị na-ada ada? - Ee, ọ dị ezigbo mkpa ka ị nọrọ hydrated - Nke a dị ka ihe mkpofu. - Mkpofu.
Echere m na ọ dị ezigbo mma. O nwere akụkụ ziri ezi niile. I nwere ike itinye karama atọ.
Onweghi onye na-echepụta ụdị ihe ahụ. Ọpụpụ gị bụ ọdachi zuru oke. Ya mere opekempe iji, narị ise okpokolo agba, nke ahụ bụ ebe m na-amalite Ego ole ka m ga-ewetara gị? - $ 600 kwa foto - kwa foto. - Ee - na-enweghị ujo? - Enweghị ujo - Ya mere, $ 100,000 ka $ 200,000 malite na? - Ee - Nihi na ichoro eriri-Carbon Omenala - Ya mere, echere m na obere ego ị ga-eri dịkarịa ala $ 100,000 $ 100,000, dịkwa mma.
Yabụ, m kwesịrị ịlaghachi na mbadamba ihe osise dịka ọ na-ada. (ọchị) wee bia na 100 nnukwu. - Ee. - Ọ dị mma.
Mkpofu, tiwaa ịnyịnya ibu m. Lee anya na ihe ndị a. Ihe a bu (ube) niru.
Kedu ka o si tọghe, o nwere karama mmiri ndị a niile (beep) na ya. Aga m achọta mmadụ. Ya mere, m 'm laghachiri n'ụlọ nkwari akụ ahụ mgbe m gagharịrị na Taipei Cycle Show ụbọchị niile na-agwa ndị na-eme etiti, ma maa gịnị? Ọ naghị adị oke mma.
Ọbụghị naanị na ha anaghị achọ mmebe eserese m, ọ masịghị ụdị mmechi ahụ. Ya mere, anyị abịaghachila ebe a ma achọrọ m ndụmọdụ ka m wee kpọọ ụfọdụ ndị ọkachamara ụlọ ọrụ ma nweta nke ahụ. Hey Cesar - Hey, kedu ka ị mere? - Yabụ, anọ m na Taiwan ugbu a, na-anwa ịwulite igwe nro m ụzọ anyị si bịa ebe a.
Enwere m ihe osise. Amaara m izugbe. Agara m ụlọ ọrụ ole na ole ma nwee nsogbu ịchọta onye ga-eme igwe kwụ otu ebe (ọchị).
M nụrụ na ị gafere otu usoro ahụ na-emecha kpebie iwu igwe kwụ otu ebe gị na Spain - Ee, ọ bụ eziokwu, m na-ekwu, maka anyị, maka obere akara, o siri ike ịmalite na Taiwan. Enwere ego dị ukwuu n’ebe ahụ, yana ego niile ị ga-enweta na nke a niile. Enwere ike ịme ya, mana maka anyị ọ bụ ihe gbasara ịme ya n'onwe anyị na ịmụ usoro a, yabụ na ọ bụghị n'ezie na ọ na-ewute mgbe m gachara Taiwan n'ihi na ịme ya ebe a bụ ihe mgbu na njedebe.
Ma anyị ka maara na ọ bụ nnukwu ọgụ. Echere m, akụkụ siri ike bụ na etu m si mata Asia nọ m ebe a, nke a bụ eziokwu (ọchị). Dịkwa mma, ị ga - eme ya ọzọ? Ka anyị laghachi ebe ị bidoro, ị ga - eme ya ọzọ? - Echere m, n'eziokwu, m ga-asị na m nwere ike ịme ya di na nwunye, ị maara mgbe ọ rutere ebe ahụ (nkwụsịtụ ọdịyo) anyị debere ya ụdị nke ikpeazụ mechara n'izu a.- Ee.- O were anyị ogologo oge , n'ihi na ime ihe n'eziokwu, m ga-amụta otu ihe ma ọ bụ abụọ banyere ịme ụdị ebe a n'onwe m, mana enwere m ike ịme otu ma ọ bụ abụọ na Asia wee jiri nwayọ gbanwee kpamkpam na Barcelona.- Ọ dị mma, nke ọma, ọ na-ada ka m. ekwesịrị m ịrapara na nrụpụta na Taiwan, hụ ma m ga-ahụ onye nọ ebe ahụ wee hụ ihe m ga-eche.
O nwere ike ọ gaghị abụ otu i si mee ya, mana ọ ka ga-abụ ihe ọchị (ọchị) .- Ee, n'ezie.- Ọ dị mma Cesar, daalụ maka enyemaka mmadụ.
Aga m eme ka ị mara ka esi aga (Skype ringtone) - Hey, Mike, kedu ihe ọ bụ? - Hey, Dave, kedu ka ị mere? - Well, nwunye, kedu ihe ị na-eme? - Ana m agbali iwulite nrọ m na atụmatụ nkwụsịtụ m bịara wee nweta ọtụtụ nsị n'aka ndị mmadụ ebe a.- Nke a dị ka ihe mkpofu.- Ọ bụ nnukwu mgbago, njikọ abụọ nwere njiri mara mma nke agbụ, mana m echela na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma, m na - eche ma ị ga - enyere m aka imewe nkwusi.
Yabụ, a na m achọ ihe gafere ogologo oge, ihe dịka otu narị na iri asatọ millimita, ya mere dị ka enduro, ebumnuche niile. Know mara, ọ ga-amasị m ịnwe isi dị elu mgbe m na-arụ ọrụ n'ihi na ọ bụ otu ahụ ka igwe kwụ otu ebe si aga ngwa ngwa - Amen. - Eeh.
Ma amaghị m ebe m ga-amalite. Enweghị m echiche ebe a. - know mara, na-ejikarị ụlọ ahịa fab, yana ezigbo ụlọ ahịa, ị nwere ike iji aluminom mee ụfọdụ ịnyịnya ibu, nke ahụ nwere ike iburu gị ihe dị ka otu afọ iji ruo isi --- afọ. - Ebee ka ị dị njikere ịmalite ịmebe igwe kwụ otu ebe.
Ihe dị ka 50 ruo 75 K kwa oge ọ bụla iji nwee ike ịnwale ihe a. Kedu maka nchebe patent? Nke ahụ ọ ga - adị mkpa maka ụlọ ọrụ gị? - Achọghị m iche banyere ya, mana m chere na ọ ga-amasị m imewe ka ọ bụrụ naanị m, nri? Nke a ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya? - You're na-ekwu okwu opekata mpe $ 300K, maka nchekwa ụwa na ọkwa dị ala. Ọ bụ atụmanya dị oke ọnụ, mana ị na-akwụ ụgwọ maka iche. - Dave, aga m agwa gị eziokwu.
Nọmba ndị a niile dị elu karịa ka m tụrụ anya ya - ee ọ bụ eziokwu - ndị a bụ nnukwu ọnụọgụ - echere m na ndị a bụ ezigbo ọnụọgụ dị ka ị nwere ike iwepụtakwu - ee - na, ị maara, ọ dabere na ya. Have ga-ekpebi ihe ị chọrọ. - Okay Dave, m ga-eme ka uche m Daalụ maka enyemaka gị.
Aga m eme ka ị mara ka ọ si aga. - Obi dị m ụtọ, jisie ike, Mike Mann. - Lezienụ anya, Dave, lee ka emechara.
Ọ dị mma, m nwetara oku skype na Cesar Rojo site na. kwụsị Uno na Dave Weagle site na hel nke ọtụtụ atụmatụ nkwusioru ma ha nyere m ezigbo ndụmọdụ. Thingsfọdụ ihe dị mma, ụfọdụ ihe adị njọ.
Dave kwuru na achọrọ m nnukwu ego iji bido, enwere m ike enweghị 500 AI enweghị ego. Cesar tụrụ aro ka ị nọrọ n'Esia maka imepụta ihe. Yabụ, echere m na ihe ihe a niile pụtara bụ na anyị kwesịrị ịmalite iche maka katalọgụ.
Anyi, anyi no ebe a na Taipei maka Taipei Cycle Show, ya mere ka anyi laghachite na ihe ngosi a, hu ma anyi nwere ike ichota okpokolo agba achicha mara mma nke gha aru oru maka ihe anyi choro. A drankụrụ m ihe dị ka mmiri tebụl iri ma mechie ihe dị ka ugboro iri. Mana anyị nwere otu ebe ọzọ iji kwụsị na nke ahụ bụ Genio, ha bụ ụlọ ọrụ pere mpe, ha na-eme ihe dị ka okirikiri iri anọ na iri ise na otu afọ ma e jiri ya tụnyere ebe ndị ọzọ na-eme ọtụtụ narị puku mmadụ, mana ha bụ ndị amaara maka agwa ha dị mma. - Ndewo - Hey, aha m bụ Mike. - Calvin.- Ọ dị mma izute gị, Calvin.- Gịnị ka ị ga-egosi m? - Ọfọn, ọ bụ igwe kwụ otu ebe m.
Ọ dịghị onye ọzọ nwere mmasị na ya. Enwere m olileanya na ị nwere ike ime ya maka m - dịkwa mma - ka anyị lee anya. - Ka anyị lee anya. - Ị dịla njikere? - Yep.Wow.- Kedu ihe ị chere? Nye m ya kwụ ọtọ. Lee, nke a yiri nzuzu.- M tinyere obi m na mkpụrụ obi m n'ime ya - Oh. (ma ọchị) Ee, omume ahụ dị oke oke ma na-atụ anya n'ihu.
Na karama mmiri atọ.- Ọ dị mkpa ka mmiri dịrị.- Wow, nke ahụ bụ ihe pụrụ iche pụrụ iche, ee.- Can nwere ike inyere m aka na nke ahụ? - Eeh, anyị nwere ike ịnwale ya, mana ọ nọ n'ọrụ.- Ọ dị, dịkwa mma, setịpụ ka anyị gaa, ka anyị kwuo maka ya.
Gosi m ihe ị nwere.- Ọ bụrụ na akara ọhụụ enweghị akụrụngwa akụrụngwa iji wuo igwe kwụ otu ebe site na ncha dịka m, ha na-azụta katalọgụ akara ngosi mepere emepe. Choose na-ahọrọ imewe na agba, wee tinye aha gị na ya ma ị nwere ike ịkpọ ya nke gị.
Ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ malitere ime ya, ụfọdụ n'ime igwe kwụ otu ebe a dịkwa mma. Ugbu a Calvin na-ekwu na ọkwa otuto m na atụmatụ m nwere ike ị me ma ọ bụ ihe ọ bụla pụtara na m ga-arapara n'ahụ otu n'ime ụdị mmeghe ha. Mana ọ na-ekwu na ha nwere ike iwere geometry m n’ọdịnihu ma tinye ya n’otu igwe kwụ otu ebe ha nwere.
nri ngbado oge tupu foto na mgbe foto
Mgbe m gafere akwụkwọ ndekọ aha ha, enwere m mmasị na ihe m hụrụ, yabụ Nzọụkwụ ọzọ bụ ịga na ihe kpatara ha bụ Taichung iji mepụta nkọwa ikpeazụ. (ụtọ jazzy music) Nnọọ na Taichung, narị narị kilomita ole na ole site na ndịda Taipei. Ugbu a, echere m na m ga-egosi na ihe ngosi a ma nwee igwe kwụ ọtọ nke ikuku carbon fiber nke m wuru, mana ọ tụgharịrị na enwere ọtụtụ nsogbu na imewe m.
Mana anyị agwala Genio okwu, ọ na-ada ka ha nwere ike imere anyị ihe ma jiri jiometrị nzuzu anyị chọrọ etu esi eme ya, mana otu akpa afụ mbụ. Anyị banyere Uber dị obere wee banye ugwu Taichung iji ruo Genio. Ha na eme otutu ihe di nma, dika anyi.
Ka anyị bata ma lelee ọrụ nke anyị nke pụrụ iche anya - M wee mara ndị otu anyị. Ikekwe ịkwesịrị ịgbanwe usoro ahụ. - Gbanwee sistemụ, ọ dị mma, enweghị m ike iji akwa mebere m dị elu? - Ee e, echere m na ikekwe ị ga-agarịrị nhazi ndị ọzọ. - Ọ dị mma. - Yabụ, enwere ike anyị ga-ebido? - Ọ dị mma - Na n’ọdịnihu, ị nwere ike ịmegharị na nke ahụ. 160 njem, echekwara m na ị nwere ike ịgbanwe jiometrị dị ka eserese gị, ma eleghị anya ị ga - ewepụta etiti maka gị ịnwale ịnwale - Ọ dị mma, enwere m ike ịhụ otu n'ime okpokolo agba ndị a? - Ee, a ga m ewetara gị otu. - Oh, nke ahụ dị mma.
Ọ dị mma, yabụ na anyị nwere ike itinye jiometrị m na okpokolo a? - Ee. - Ogologo oge ole ka ọ na-ewe? Ekwesịrị m ịgbatị ụbọchị ole na ole, ma ọ bụ - Ee e, ọ ga-ewe izu asatọ - izu asatọ.
Ya mere, ọ tụgharịrị na m na-egosi na Taiwan na atụmanya ime ka nrọ m bụrụ nke a dị ezigbo mma. Amaghị m ihe m na-etinye onwe m, ọ bụghị naanị na usoro a dị oke ọnụ karịa ka m chere, ọ dịkwa ọtụtụ mgbagwoju anya. Ugbu a, Genio ga-elekọta ọrụ niile a na-arụ na nnwale, n'ime izu asatọ ka etiti a ga-egosi na Canada.
Ma mụ onwe m, a nọ m na-enweta ọgwụ ọgwụ ụra, na-awụli elu n'azụ ụgbọelu ma laghachi Canada. Ọ dị mma, onye ọ bụla, oge nke eziokwu. Eku ahụ pụtara naanị awa ole na ole gara aga.
Anyị ga-adọka ebe a, lee ihe anyị nwere. N'ebe a ka anyị na-aga.- O doro anya na ọ bụghị ihe m kpebiri ime, mana n'ikpeazụ ịhụ onye ahụ bụ ihe efu.
Enweghị akwụkwọ ntuziaka Bekee, mana ọ gara nke ọma ma enwere m obere mkpọchi karịa ka ị ga-atụ anya ya. Iji wuo ya, anyị jiri ụfọdụ iberibe mpempe sitere na Ether Team, TRP, One Up na Sram. Iji mee ka isiokwu na-aga n'ihu na-aga n'ihu, anyị chọrọ ndụdụ efu na-enweghị atụ ma ọ nweghị onye chọrọ ịme otu maka anyị.
Dị egwu. Maka powertrain, apụrụ m ịhụ ihe odide ahụ na mgbidi, enweghị ya enweghị igbe nzuzu. Tupu anyị nwee gia na iri abụọ na asaa, mgbe ahụ anyị nwee iri abụọ ma ugbu a anyị nwere iri na abụọ.
O doro anya na ọdịnihu dị ole na ole, n'ihi ya, anyị gara maka Stra 8-speed e-bike drivetrain with long range. Na, oh oh oh aha, nri? Ọ? Aha igwe kwụ otu ebe kwesiri ka iwe iwe, ọ bụghị ya? Ọrịa, iwe, ogbu mmadụ.
Mana ahụkwara m donuts n'anya ma m na-achọ nkwado nkwado Tim Hortons. Ya mere, ọ dị ya, Grim Donut. Ọdịnihu ga-adị gị.
Amaghị m ihe kpatara ndị nzuzu ndị ahụ enweghị ike imepụta nke a. Ọ dị mfe. (Detuo ọkọlọtọ) Ekwesịrị m ịnwale ihe a tupu ị nye iwu puku kwuru puku na kaadị Pinkbike.
The Grim Donut dị ndụ. Lee anyị. Nke a bụ nke mbụ m na-agba ịnyịnya ihe a tupu ebukọta, m nọ na ya, ọbụnadị ịnọdụ ala na igwe kwụ otu ebe a.
Ka anyi nwaa ya. (Bike gear clicks) know mara, ọ na-adị ya ka ukwu ya ọ dịka ọ bụ nke ndụdụ anaghị arụ ọrụ. Ọ dị ka ọ chọrọ ime nke ahụ.
Amaghị m ihe ga-eme ebe a. N'ezie, kpu okpu agha. Ka anyị kwụsị.
Ya mere, anyị maara na ịgba ịnyịnya ugwu na-atọ ụtọ - ọ bụ ya mere anyị ji nọrọ ebe a n'ọhịa - ị nwere ike ịrụ ụka ụbọchị niile banyere igwe kacha mma - ee, yabụ echere m, enwere m ezigbo igwe kwụ otu ebe. - Ee, mana ị chọrọ ihe niile na-egbu egbu ka ị nwee ọtụtụ ntụrụndụ? - Ee e, nihi na echere m na ichoro nkpuru ahihia ka o nwee ike nwee obi uto dika o kwere - Bianu, ka anyi gaa maka nkpuru obi ma hu onye nwere onu ochi ya nke oma - Odi, odikwa. You nwere isi dị na azụ nke uche gị? - Ee - Ee? Nice.- Enwere m ọchị karịa gị.- Nah! (mumbles) Anyị na-agbago ebe ahụ? - Ee, ọ na-atọ ụtọ n’ebe ahụ. (egwu dị egwu) - Ọ dị mma, nke a bụ ngwa ọgụ m ịhọrọ taa iji mee ka m na-amụmụ ọnụ ọchị ruo ọtụtụ kilomita.
Don'tchọghị ihe ọ bụla dị ka Neil - nke a bụ Scott Genius 700 Tuned. Nke a bụ igwe kwụ otu ebe zuru ezu. Carbon eriri nile, otu mpempe akwụkwọ na azuokokoosisi, nkwusioru ikuku, o nwere ihe niile.
Ma ọ na-abịa na a adịchaghị price. Ọ na-efu £ 6,999. Ọ bụ nnukwu ego, mana akpọrọ m onwe m imebi.
Ọ na-atọ m ụtọ ịgba ịnyịnya igwe n'elu ugwu ụbọchị ndị a. (egwu egwu) (teknụzụ) - Ọ bụ ezie na ụzọ ndị ahụ dị n'ụdị dị ịtụnanya, echere m na enwere m nsogbu mgbe niile na enweghị ọchị na igwe kwụ otu ebe - Ee. - Ọ dị mma.- Ọ dị ezigbo mma, mana m furu efu n'azụ gị mgbe ị batara n'okporo ụzọ.- Ee.- will ga-ahụkwu njide.
Nke a bụ ihe m na - agba mgba - Ọ dị mma, m na - agba ọsọ ọsọ dịka m nwere ike, ọkachasị, ọ bụghị oge niile, mana igwe kwụ otu a nwere ike bụrụ nke zuru oke maka ụzọ a. Yabụ na ọ bụ 29er, 150 mil njem. Enweghị ike ịka mma. - Gbalịa soro ọsọ gị, enwere m nsogbu, agbaliri m taya m nke ọma n'ihi na ọ mara ezigbo mma ma enweghị m ike ịchọta njide zuru oke, mana ọ na-abata na mmewere ya mgbe ụzọ dara obere obere na-abịa nwayọ na esikwu nso, na unyi di ya uto. - Ebee ka hardtails dị ukwuu n’ezie? Dị ka unyi na-awụlikwa elu, ọ na - adị njọ mgbe niile - ee, n'okporo ụzọ dị mma nke na - amị amị ma ị dị obere na - akpụgharị ma na - agbapụta, ị ga - enweta ọsọ ọsọ karịa karịa nke gị n'ike zuru oke - na n'elu anyị kwuru okwu na ụzọ ụlọ elu dị ka a ga - asị na ị na - aga njem na ndị na - ama ụlọikwuu gị na - achọta n, na - etinye igwe kwụ otu ebe na van - Oof. - Ma ị gara ebe dị jụụ mana ịchọrọ ịnya, ịnyịnya mmiri bụ ezigbo nhọrọ maka nke ahụ. - Aga m aga 100% na ya.
Ọ bụ ihe kachasị mma, enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme, ọ dị mfe. Obere ihe dị nfe na-ezighi ezi, ebe nkwusioru, ị nwere ọhịa nke nwere ike ịga, ị maara? - Emebiri m, ahụrụ m igwe kwụ otu ebe n’anya. Okpokoro ọnụ.
Ma m na-eme, ị maara --- ọ bụ ihe niile - ọ bụ ihe niile, nri. (Cheering funk music) oh my hell - nke ahụ bụ nnukwu ike, (moans) super fun, ọ bụghị ya Blake? - mma, echeghị m na ọ bụ ihe ọchị, Neil. Mba, ọ mara ezigbo mma, anọ m ebe niile.
Anọ m na njedebe. (Neil na-achị ọchị) Anọ m na njedebe. - Abụ m ngwa ngwa.-Ee, ị gaghị enwe ike ịnọ n’ahịrị ma ọ bụrụ na ị bụ, (egwu na-atọ ọchị funk) - Ya mere Blake, anyị na-agba ụzọ ụkwụ dị jụụ. - Oh, anyị gbara ụfọdụ The Epic ụzọ ụkwụ ool ọkụ ụzọ na-akwụsị site na ikpeazụ nzọ ụkwụ.
M chụpụrụ ha tupu, n'ezie.- Ee, M - Ma ị bido, mana nke ahụ apụtaghị na ihe siri ike enweghị ike ijikwa ya.- Ọfọn, ha nwere ike, nri? - Ha na-echetara m dịka Land Rover.
Anyị na-enweta ya na nkwupụta oge niile, nke ahụ dị mma, anaghị m akpọ ya asị ma ọlị, m ka hụrụ ya n'anya mana enwere m ike ịgba ịnyịnya ígwè m zuru ezu karịa. M nwere a n'ezie oyi XC hardtail carbon bike. Anyị hụrụ igwe kwụ otu ebe. - Anyị na-ekwu banyere anyịnya igwe m hụrụ ezigbo mma.
Adị m ka oh wow.- Na nzọ ụkwụ anyị zutere enyi nwere carbon hardtail na taya akpụkpọ ahụ.- Ọ nwere post dropper.- Ezigbo mma.- Oh, ọ mara mma mara mma, enwere m obere anyaụfụ.- Ọbụna nwatakịrị nwanyị nọ n'ụlọ mmanya n'abalị ụnyaahụ - anyị nwere - nwere ụzọ njem njem njem dị egwu.
Ọ na-atọ ụtọ. Ọ dị iche. M na-enweta nzọ ụkwụ dị ntakịrị karịa ka ị na-eche.
Anyị ga-eme nyocha, echere m. - Oh, ezigbo echiche.- Enwere m mmasị ịmara ihe ndị na-ekiri anyị na-agba ịnyịnya, yabụ pịa ebe ahụ, ka m mara nkwanye zuru ezu ma ọ bụ hardtail.
Mee ka anyi mata n’okwu ihe kpatara iji masi gi ịgba igwe a.- Ee, o dabere ma o bu nkpuru ozuzu ma obu isi ike. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ọmarịcha edemede ọzọ ebe m na-agbanye igwe kwụ otu ebe a na njedebe ya, pịa ebe a n'okpuru. - Nye anyị isi mkpịsị aka wee pịa bọtịnụ sub.
Mongoose ọ na-eme ezigbo igwe igwe?
Mongoose Mountain anyịnya igwena-ewu ewu n'ezie maka arụmọrụ ha. Agbanyeghị na ụlọ ọrụ ahụ na-eme ọmarịcha ihe isi ike, ha na-ahụkwa maka ụfọdụ anụ ọhịa na-enweghị atụ.Mongoose igwe kwụ otu ebeadabara ma ụmụ nwanyị ma ụmụ nwoke, mana ha nwekwara ụdị e mere maka ụmụaka.Eprel 15 2020
Kedu ezigbo igwe kwụ otu ebe? Ana m enweta ajụjụ a kwa ụbọchị. Ọ bụ ya mere taa m na-enye gị ngwaọrụ ịchọrọ iji chọta igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ nke ejirila, agbanyeghị akara ahụ. Ma mbụ anyị kwesịrị ịkọwapụta ihe ntinye ntinye dị larịị.
Kpachara anya maka ụdị ihe ngwugwu a, ma ọ bụ nke ka njọ, na onye na-ere uda nke etinyebere na etiti. Bikes dị ka ndị a nwere ike ịda site na mbibi zuru oke, na ịnyagharị ugwu na-abụ ịda. Ya mere, onye na-ere ahịa nke ure bụ ihe mbụ ị kwesịrị ịchọrọ iji chọpụta ma ọ bụrụ na ịnyịnya ígwè dị mma.
Ọbụna igwe kwụ otu ebe kachasị mfe nwere ebe a kpụrụ akpụ, na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ebe a. N'ihi ya, nyocha gị kwesịrị ịmalite ma eleghị anya kwụsị ya. Akụkụ ọzọ dị mkpa ịchọrọ bụ ụdọ SS nwere eriri, nke ị nwere ike ịmata site na mwepụ ndị a ebe a, yana ihe mkpuchi 4 ndị ahụ jidere aka ahụ.
Ọ bụrụ n'ịhụ nke a kama, ọ na-abụkarị akụkọ ọjọọ. Ọ bụrụ n’inwere ihe ị ga - arụ ma ọ bụ dochie anya n’ihu, tinyere ndụdụ ahụ, ị ​​ga - ejedebe na akụkụ ndị a na - apụghị ịtụkwasị obi ma ọ bụ akụkụ igwe kwụ otu ebe ndị siri ike ịchọta. Ochioma na ichota ihe ndi ozo nke mbu nke 90s iji dochie nke ochie gi.
Ọbụghị naanị na eriri na - enweghị eriri dị mfe ma dị ọnụ ala iji kwado ya, mana ọ na - agbasikwa ike, ihe ị ga - achọ imebi. Ga n'ihu na wiil ndị ahụ, ịkwesịrị ijide n'aka na ha nwere ndị na-agbapụta ngwa ngwa. Ndị a bụ ndị a na-ahụkarị na igwe kwụ otu ebe ma na-enye gị ohere iwepu ma ọ bụ dochie wiilị ndị ahụ na aka na-enweghị ngwaọrụ, mana nke ka mkpa bụ na ha bụ ihe ngosipụta maka ebumnuche nke igwe kwụ otu ebe.
Ọ bụrụ na a ga-apụghị izere ezere taya dị larịị mgbe ị na-agba ịnyịnya ugwu, ọ bụ nsogbu na ịnwe ngbacha 15mm mgbe niile ka ị wepụ mkpụrụ ndị a. Nke ka njọ, igwe kwụ otu ebe na mkpụrụ osisi na axles fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịkwalite wiil ndị ahụ, wiil na otu n’ime ihe ị ga-eto karịa ka ị nwetara ahụmịhe. Yabụ na igwe elu ugwu dị elu, chọọ maka ndị na-agbapụta ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị hụrụ mkpụrụ, pụọ.
Ihe na - esote abiala ma mechikwaa ndi na - emekorita ya, ha adighi n’otu. Ekwenyesiri m ike na ị ga-ahụ nsogbu na nke a. Agbaji ihe ebe a ma na ị nwere ike ịbụ ụgwọ nke igwe gị niile ịkọpụta ihe, yabụ ọ bụrụ na ọ bụ gị ka ọ dị mma.
Ma ọ bụghị ya, chọọ ihe ị nwere ike ịgbanye. Ihe ọzọ ị ga-achọ bụ brek diski na azụ. Ọbụna ọnụ igwe diski dị ọnụ ala nwere ike gbanwere maka ndị ka mma, nke dị mkpa ịmara n'ihi na igwe kwụ otu ebe ga-enwerịrị isi mgbakwunye maka nke a site na mbido.
Nke ka mkpa bụ na diski brek bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi karịa rim brek, ọ bụ ya mere ugwu igwe kwụ otu ebe na ngwa ngwa na mkpebi siri ike gbanwee ha ọtụtụ iri afọ gara aga. N'ihi na ezigbo ugwu. Ọ bụrụ na ndị bike bụ ala-mmezi na upgradeable, onye kwesịrị nnọọ enyo onye na-enweghị diski brek.
N'ikpeazụ, ị kwesịrị ijide n'aka na igwe kwụ otu ebe na-abịa n'ụdị dị iche iche na onye nrụpụta na-enye n'ezie nduzi na nha ị chọrọ. Nke a dị mfe dịka iji Google, nka efu. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na onye nrụpụta anaghị enye ozi a, yabụ na ha nwere ike ọ gaghị eche ọtụtụ ihe banyere igwe kwụ otu ebe ha na yabụ na ị gaghị atụkwasị ya obi na ọ ga-eduru gị n'ime ọhịa, yabụ akara ngosi a enweghị ebumnobi karịa ndị ọzọ , ma ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala, ịnwe otu Inweta igwe kwụ otu ebe nke ga-adabara gị na ya.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-egosi ịnyịnya ígwè na-adọkpụgharị, ha anaghị adị mkpa ma ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe ahụ anaghị emezu ihe anyị chọrọ. Ugbu a, anyị ga-elekwasị anya n'ihe ị ga-atụ anya site na igwe kwụ otu ebe dị ka nke a, na ụfọdụ n'ime ihe ndị ị nwere ike ime iji kwalite ya. Nke mbụ, ọ dị mkpa iburu n'obi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ịbanye n'ụgbọ ịnyịnya ígwè bụ B. hardtails ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe na-enweghị nkwụsị azụ.
Hardtail ojii a na-esote Overdrive bụ ezigbo ihe atụ nke igwe kwụ otu ebe. The raked fork, ike ike angles, obosara handlebars, ogologo njem, na mkpumkpu azuokokoosisi na-eme ka ọ ka mma maka ụdị nke ịnyịnya m na-eme. Ebe ọ bụ na ịnweghị ike ịtụgharị igwe kwụ otu ebe XC n’ime igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ na ntụgharị, ịkwesịrị ịkwụwa aka ọtọ gbasara ihe ịchọrọ ime igwe kwụ otu ebe tupu ịzụta otu.
Ma ọ bụrụ na mmefu ego gị dị n'okpuru $ 500, ma ọ masịrị gị ma ọ bụ na ọ masịghị, ịnwere ike ị nweta igwe kwụ otu ebe XC site na oge ị ga - aga n’ihu ịwụli elu ma tụba igwe kwụ otu ebe ka ị nwee ntakịrị, ị nwere ike iche na - egbochi gị. Nke a bụ ihe m mere iji melite ike nke mmefu ego m XC igwe kwụ otu ebe. Ihe kachasị mma i nwere ike ime bụ, ihu ala, na-agbanwe taya. Mgbe m tụbara taya ndị ahụ sara mbara karị, nke na-agba agba na m overdrive, ọ dị ka igwe kwụ otu ebe dị iche.
Enwere m ike ịgba ọsọ taya ndị a na nrụgide dị ala, nke mere ka ha nwekwuo obi ụtọ ma gbaghara. Ma ọ gwụbeghị. You na-anụ ụda olu m niile kụrụ aka ebe niile, ma n'ezie ọ bịara kpamkpam n'ọtụtụ mmiri na mmali.
Iji dozie nke a, m wụnye usoro nduzi nke kpochapụrụ nsogbu ahụ. Nke a ga - efu gị ihe dị ala karịa ịkwalite ụgbọala gị, nke nwere ike ịgba gị ọsọ dịka igwe kwụ otu ebe a. Ọ bụrụ na m bụ onye mbido iji nweta dị ka o kwere na a igwe kwụ otu ebe, M nwere ike nweta nkwalite ndị pedals na ma eleghị anya, ndụdụ ka ihe dị ka nke a kwa.
Entgba ụgwọ karịa nke a agaghị abụ ihe echekwa ma tụlee na ezigbo ụzọ igwe kwụ otu ebe nwere ike ijide uru ya, ọ ga-aka mma ire ya ma melite ya niile. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịnwee igwe kwụ otu ebe ma chọpụta na ọ dara ụfọdụ n'ime ule ndị a, ị ka nwere ike irite uru site na edemede a. Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ ugbu a maka gị ma nwee obi ụtọ na ya wee nwee ike ịbelata ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọ na-egbochi gị, ugbu a ị nwere ngwaọrụ ịchọta ihe ka mma.
Nke ahụ kwuru, anyị ekwubeghị maka mgbakọ, ndozi, ma ọ bụ nkwalite ndị ọzọ niile ị nwere ike ịjụ, site na enyemaka nke ndị na-ekiri m, aga m eme ike m niile ịza ha na nkọwa. Ya mere, chọta a ezi mbido si igwe kwụ otu ebe na-enwe ya. N'ihi na ị nọ naanị otu afọ ịhapụ ire ngwongwo gị niile na ịkwụ ụgwọ igwe kwụ otu ebe dị oke ọnụ. Ọ na-eme onye kachasị mma n'ime anyị. Daalụ maka ịchụpụ m taa wee hụ gị oge ọzọ.
Mongoose anyịnya igwe ka ọ dị mma?
Ọ bụrụ na-eji nke ọma, ngalaba ụlọ ahịa akara nkeMgbọ ịnyịnya Mongoosenwere ike ijide akanke ọma. Ezie na ụdị ndị a nwere ike ọ gaghị enye akụrụngwa kachasị mma ma ọ bụ osisi siri ike, ma ọ bụ maka ịnya ma ọ bụ na-apụ n'okporo ụzọ, ekwesiri ighota na ngalaba-ụlọ ahịaMgbọ ịnyịnya Mongooseemeghị ka ndị na-agba ịnyịnya ịrụ ọrụ.
Hey mmadụ niile, ma nabata na Tuesday ọzọ ebe m ga-ekwu maka ihe mere Walmart BMX igwe kwụ otu ebe abụghị ezigbo igwe kwụ otu ebe BMX n'isiokwu a iji mee ka ndị mụrụ gị ma ọ bụ onye ọzọ zụta gị ezigbo igwe BMX mana ha anaghị eme ya zụta ya ma ha chọrọ ihe kpatara ya site n'aka onye nwere ntụkwasị obi ụfọdụ ma ha chọrọ onye dị ka m ịgwa ha ka ha nweta ezigbo igwe BMX n'ezie ma ọ bụrụ na ị banye BMX n'ezie n'oge a ịkwesịrị ịkwụsị akụkọ ma wetara ha ma ọ bụ were ha ebe ma ka ha lelee. Ndị ọzọ ụzọ, ka anyị jụọ ajụjụ nke mere BMX anyịnya igwe si Walmart abụghị ezigbo BMX anyịnya igwe. Are na-agaghị doro ihe fọrọ nke nta otu àgwà ụkpụrụ, ọ bụla otu akụkụ nke a BMX bike e mere maka n'ụzọ.
Emere ya ka ọ dị ka ezigbo BMX igwe kwụ otu ebe a na-agba Walmart ka a na-agba ịnyịnya na okirikiri n'okporo ụzọ ahụ kidsmụaka dị afọ iri na-agaghị awụlikwa elu, ha ekwesịghịkwa ịsị na ọ bụ Walmart BMX Bike Can't Take Mmegbu, ọ pụtara na ịchọghị ka ọ gbalịa ịnagide mmegbu nke ezigbo BMX na-agbago na ya, nke ahụ na-ewetara anyị ihu na isi okwu ọzọ m chọrọ ikwu okwu na ndị a bụ ihe eji arụ ọrụ BMX igwe kwụ otu ebe si Walmart bụ n'ụzọ ọ bụla tụnyere ihe nke a ezigbo BMX igwe kwụ otu ebe Rio BMX anyịnya igwe na-mere si 4130 Chromoly na nwere obere si elu àgwà aluminum, ma mgbe ọ na-abịa wiil si Walmart na BMX na-aga anyịnya igwe site Walmartsie na-mere nke elu ike ígwè maka niile nke isi mmiri nke igwe kwụ otu ebe na aluminom maka ihe ọ bụla ọzọ na ha na-eme ihe n'eziokwu na ha na-dị nnọọ iberibe na-eme ihe n'eziokwu, want na-agaghị na-agba ịnyịnya a jupụtara elu ike ígwè etiti maka ụdị ọ bụla nke ezigbo azụmahịa BMX nọkwa maka a ogologo oge, ọ dịkarịa ala enwere ohere na mgbe a nnọọ obere oge ma ọ bụ ike slams ma ọ bụ dara na igwe kwụ otu ebe ga-ada ma ọ bụ na-egosi ihe ịrịba ama nke ọdịda nke atọ ihe m chọrọ ikwu banyere nke a bụ nnukwu ihe m chọrọ ikwu banyere ya na nke ahụ bụ nchekwa. Dị ka m kwuru, e zubere igwe kwụ otu ebe a maka ịwụli elu. Achọghị ka a gwerie ha, ụmụaka ga-agbagharị ha na gburugburu na-enweghị ebumnuche nke ịme ihe ọ bụla ezigbo igwe kwụ otu ebe BMX gafere, yabụ, nwatakịrị gị amaghị nke ọma ezigbo aghụghọ BMX na igwe kwụ otu ebe si Walmart na ha nwere ike ịpụ maka obere ntakịrị mana ị chọghị itinye ha n'ihe egwu site na ịchị onwe gị ọchị ma zụta igwe kwụ otu ebe site na Walmart, ọkachasị mgbe ị tụlere na nke a bụ ihe ị na-amatabeghị na ị nwere ike gaa Craigslist ma ọ bụ Facebook ma yikarịrị n'ime 50 kilomita nke ị nwere ike ịchọta ezigbo igwe BMX na ọnụ ahịa ezi uche Ọ nwere ike ịbụ igwe kwụ otu ebe zuru ezu mmadụ zụtara ma kwụsị iji ya nwere ike ịbụ igwe kwụ otu ebe Nke a bụ omenala na ụdị dị iche iche akụkụ dị elu dị ka nke a na gị nke a ị nwere ike ịme obere ịkwụ ụgwọ mgbe ị tinyere ego na igwe elekere Walmart na-atụ ụtụ na ihe ndị ahụ niile maka ihe ziri ezi ma sie ike iji aka gị? Nke a bụ akụkụ nke isiokwu m na-agwa ndị toro eto m gwara onye ọ bụla wetara gị edemede a ka ọ wetara gị edemede ahụ, nke a bụ akụkụ ebe ị nwere ike ịtụgharị ya ma hụ na ha etinyela onwe ha na BMXFor maka ịnyagharị ma ọ dịkarịa ala ụfọdụ oge tupu ịpụ apụ na itinye nnukwu ego na igwe kwụ otu ebe.
Ya mere ee, mgbe ụfọdụ ọ nwere ike ịdị mma ịhapụ Walmart igwe kwụ otu ebe maka izu. Agaghị m ewe ya karịa otu ọnwa na-agba ịnyịnya BMX na skate park n'ihi na ọ ga-emerụ ha ahụ, m na-ekwe nkwa ma ọ bụrụ na ha na-agba ịnyịnya Walmart, na-agbagharị n'okporo ụzọ skate, ma ọ bụ ọbụna remember na-echeta ịkwọ ụgbọala n'okporo ụzọ. Ha ga-emerụ onwe gị ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe ahụ oge ụfọdụ.
Ga-enwetara ha ihe ga-anagide mmekpa ahụ a na-ekpughere ha, nke a na-abịakwa n'oge kwa, mgbe nwa gị etoola 14 15, ọ na-anwa ịgbago BMX. Ha na-ebuwanye ibu, n'ezie. Na na pụtara na a Walmart igwe kwụ otu ebe ga-aka ọbụna ole na ole n'ime ha.
Yabụ ịkwesịrị ịtụle ịga ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe na mba, ị nwere ike ọ gaghị achọ ịtụle eziokwu ahụ bụ na ị ga-agarịrị ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe ma jụọ ha gịnị? Ha kwesiri inye na udiri ugwo ole ma ha g’enyere gi aka. Enwekwara m ụfọdụ isiokwu ndị ọzọ na ọwa YouTube m ka ị lelee dịka ndị na-azụ ahịa BMX. Enwere ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ n'ịntanetị ka ị lelee nke ọma na enweghị m ike ịkọwapụta oke mkpa ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe dị nso ga-adị nwa gị ma ọ bụrụ na ha arapara na BMX.
Ọ bụ ebe ị ga-aga ma nwekwaa onye ọzọ nwere ike ịnọ ya ịchọ ha mgbe ị na-anọghị ya na mgbe ha nọ n’igwe ha ma ọ bụ ebe a ga-enweta enyemaka, ọ bụ naanị mmetụta dị mma maka ụmụaka ndị Ọ bụrụ na echeghị m na ị kwesịrị ịtụle Walmart na ịzụta igwe kwụ otu ebe, m kwesịrị ịmasị ka ị ga-asị na ị ga-aga n'ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe gị ma gwa ha okwu n'ihi na ha nwere ike inyere gị aka ma ọ bụrụ na ha nwere ike 't na ha anaghị emekọ na BMX chọta onye ọzọ ma gaa leta ha n'ihi na enwere ike ịnwe ụlọ ahịa dị nso na-enye gị ndị nọ BMX ma chọọ inyere ụmụ aka aka. Nwee nchebe ma nwee ihe ịga nke ọma site na ịnya ịnyịnya ígwè gị n'ụzọ m chọrọ.
Akụkụ ọzọ nke ịzụ ahịa na mpaghara ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe bụ na oge ọ bụla ị zụtara igwe kwụ otu ebe n'aka ha ọ na-abịa na nkwado ha maka igwe kwụ otu ebe ahụ mgbe ịzụrụ igwe kwụ otu ebe site na Walmart na naanị m ga-eweta ya na ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ na igwe kwụ otu ebe . Ha nwere ike ọ gaghị achọ igosi gị otu esi eji ya eme ihe, mana ọ bụrụ na ịzụtara nwa gị igwe kwụ otu ebe na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe a, ha nwere ike ịchọ inyere ha aka wee gosi ha ihe dị n'ụgbọala ahụ n'ebughị iwebata ya. maka mmezi mgbe ha nwere ajụjụ ọsịsọ ma ha ga - enwe ike ịkwado ihe maka nwelite n'ọdịnihu na ihe ndị ọzọ mgbe ị na - azụ ahịa na Walmart ma ọ bụ na ịntanetị? ihe ị ga-atụle mgbe ịzụrụ igwe eletriki BMX na mgbe ọ bara uru mgbe ị hụrụ na nwa ewu ahụ na-agba BMX n'ime ọnwa isii ruo otu afọ.
Chọghị ọgbaghara na igwe Walmart n'ihi na ọ bụrụ na ị ga-azụta igwe kwụ otu ebe ọzọ ma ọ bụrụ na ha bibie igwe kwụ otu ebe ị zụtara na Walmart na mgbe ahụ ị ga-emefu nnukwu ego karịa gịnị kpatara na ị gaghị eji Walmart bike? Ego dị n'ụgbọala BMX ziri ezi iji bido na-echegbughi nchekwa nke ụmụ gị maka otu na abụọ. Ego gị na-efu naanị na igwe kwụ otu ebe ga-ada ada na mgbe ịnọ n'ọnọdụ ebe ị ga-enwerịrị ịzụta igwe kwụ otu ebe site na Walmart n'ihi na inweghị ego ọ bụla ọzọ. Enwere m ndị enyi na-eme igwe kwụ otu ebe a na Walmart na ndụmọdụ ha n'isiokwu a bụ: lelee ihe niile dị na igwe kwụ otu ebe, were ya gaa ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe.
Mgbe ha kwesiri ile ya anya ma jide n'aka na ihe nile di nkpa ma dozie ha nke oma n'ihi na ichoghi Jimmy, onye n'èzí anwuru anwuru ka o na-ebughachi ugbo ala n'ime Walmart na-eme igwe BMX gi, na-eme ya ma obu adighi etinye ya. jikọtara ọnụ nke ọma na nwa gị ga-aga ebe a na-egwu mmiri ma gbalịa ịwụli elu na ogwe ndị ahụ laghachi azụ ma ọ bụ gaa n'ihu ma hapụ ha ka ha dakwasị ụgwọ na mmejọ nke onye ọzọ. N'ikwu nke ahụ, enwere m olileanya na ị hụrụ isiokwu a ma gee ntị ma ghọta ihe niile m ga-ekwu n'ihi na ọ bụ eziokwu niile na m chọrọ nnọọ inyere onye ọ bụla ị bụ aka, ọ nwere ike ịbụ ịhụ isiokwu a ma na-eche echiche ịzụta igwe BMX maka nwa gị ma ọ bụ onye ọ bụla ọ bụ Mee na ịzụta ihe asian mkpebi mgbe ị na-azụ ihe. Ahụla m ọtụtụ isiokwu ntanetị nke YouTube BMX ndị mmadụ na-anwa ịnya ịnyịnya Walmart dịka ha na-agba ịnyịnya ígwè nke ha ma ha mezue ma bibie ha ma ọ bụ otu n'ime ihe ndị ahụ m na-ahụghị n'ezie onye ọ bụla kwuru banyere ya .
Gịnị kpatara nke a? na ihe kpatara enwere ihe dị iche na igwe Walmart a na ezigbo BMX dị ka nke a Ma amaara m na onye na-anọghị na BMX ụwa nwere ike ọ gaghị enwe ike ịkọ ọdịiche dị n'etiti abụọ ahụ naanị site na ile ha anya, mana ọ bụrụ tinye mmadụ abụọ n’ime ha n’akụkụ ya? onye ọ bụla ọzọ ị pụrụ ịhụ ihe dị iche na m kwere gị nkwa na enwere nnukwu esemokwu, ọbụlagodi karịa ihe m na-ekwu, na ụlọ ọrụ ndị na-eme igwe kwụ otu ebe ị hụrụ na Walmartare na-anwa ndị a Iji imitateomie ịnyịnya ígwè dịka o kwere mee, ka ha nwere ike, ọ bụ ihe kwere nghọta na mmadụ nwere ike ihie ụzọ maka ibe ya tupu ha enwee ezigbo nghọta banyere isiokwu a. N'ikwu nke ahụ, onye ọ bụla nwere ajụjụ, biko hapụ ha na nkọwa ndị dị n'okpuru ma ọ bụ pịgharịa site na nkwupụta ma jide n'aka na ajụbeghị ajụjụ gị n'ihi na amaara m na a ga-enwe ọtụtụ n'ime ha na nkwupụta m chọrọ, dịka ị nwere ike ịnyere aka ọtụtụ ndị dị ka o kwere mee na m chọrọ ka ọtụtụ ụmụaka dị ka o kwere mee na-agba ịnyịnya ígwè. Achọghị m ka nwatakịrị kwụsị ịnya ịnyịnya n'ihi na ha nwere igwe Walmart ma ọ bụ na-agba ịnyịnya ochie Walmart na ogige skate na-anwa ịwụli ma daa ihe ọ chọghịkwa ịgba ọzọ Don'tchọghị ịhụ na achọrọ m BMX ka ọtụtụ ndị dị ka o kwere mee.
Ya mere aga m emechi edemede ebe a, yabụ ọ bụrụ na ị mụtara ihe ma ọ bụ mee mkpebi ka mma ọ masịrị gị, denye aha na ịzụta BMX igwe kwụ otu ebe maka mmadụ na ndụ gị n'ihi edemede a, kwa, mee ka m mara na ngalaba nkọwa N'okpuru ebe a, n'ihi na enwere m ọtụtụ akụkọ dị ka nke a ma ọ bụ na nwa gị ma ọ bụ onye ọ bụla nwere ike ịba uru mgbe ha nwetara igwe kwụ otu ebe BMX, enwere m ndụmọdụ maka otu esi arụ ọrụ na igwe kwụ otu ebe gị ana m abịa oge ọ bụla akụkọ akụkọ BMX. na Fraịdee na-ekwu maka ihe ọhụrụ niile, na-apụta na uru na-eme isiokwu na ụdị ihe ndị ọzọ niile yana naanị isiokwu m na-ekpori ndụ ma ọ bụ ụbọchị ndị ọzọ n'izu na ndị enyi m na-agba ịnyịnya na mgbe ụfọdụ ana m asọ ma kwuo banyere akụkụ dị iche iche nke BMX, ya mere ọ bụrụ na nke ahụ dị ka ihe ị nwere ike inwe mmasị na ya, pịa bọtịnụ 'denye aha'. Ederede ndị ọzọ na-egosi ma ị nwere ike ịchọta isiokwu niile nwere ọtụtụ ndụmọdụ na aghụghọ ga-enyere gị aka n'ọdịnihu site na ịnyịnya ígwè ị nwere ike ịzụta belụsọ ma ọ bụ igwe Walmart n'ihi na, n'eziokwu niile, atụghị m ịme edemede banyere otu esi na-arụ ọrụ na anyịnya igwe dị ka nke a n'ihi na m na-echeghị na onye ọ bụla na-agbalị n'ezie ịnya BMX ga-agba otu n'ime ndị a anyịnya igwe na na? Daalụ maka ịkwanye na ilele edemede a. Enwere m olileanya n'ezie na ọ bara uru ma hụ gị echi, enwere m olileanya maka isiokwu ọzọ.
Ekele na bye
Eme Mongoose na USA?
Mongooseanyịnya igwe bụarụpụtarana nkwekọrịta na Asia, nke mbụ na China. Pacific Cycle nwere ndị ọrụ 450, ihe dị ka 100 n'ime ndị nọ n'isi ụlọ ọrụ ya dị na Madison. Ọrụ ndị fọdụrụ na ebe nkesa anọ - na Illinois, Georgia na abụọ na California.Ọnwa Ise 28, 2017
Ndị Hardtails dị mma karịa nkwusioru zuru ezu?
Dị ka nke hazuru-nkwusiorundị ibe,hardtailsbụ maka iji ụzọ na-arụ ọrụ ma na-adịkarị ọnụ ala ma na-acha ọkụkarịa nkwusioru abụọanyịnya igwe. Ma mgbe azuru-nkwusioruigwe kwụ otu ebe nwere ike inye mmụba na njikwa dị elu ka ọ na-agba, ahardtailE kwesịghị ileghara ịnyịnya ígwè anya.Ọkt 29 2020
Kedu nke bụ ngwa ngwa ngwa ngwa ma ọ bụ nkwusi zuru ezu?
Nahardtailbụ onye mmeri na mgbọrọgwụ mkpọrọgwụ, ịbụỌsọ ọsọmaka obere mgbalị. Nsonaazụ ahụ dị mgbagwoju anya na ụkwụ siri ike. Nankwusioru zuru ezudị ngwa ngwa na mgbada maka obere ike, mana achọrọ ike karịa iji jigide otu ọsọ mara mma ebe niile na njem ahụ, ọkachasị ịrị elu.Ọgọst 5 2015
Schwinn ọ ka mongoose mma?
Onye mmeri:Schwinnn'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị igwe kwụ otu ebe na ụdị igwe kwụ otu ebe nke ha na-enye. Ka o sina dị, ọ bụrụ na ịnọ n'ahịa maka BMXma ọ bụobodo igwe kwụ otu ebe,Mongoosebụmmanhọrọ.
Ndi mongoose Ledge 2.1 bu ezigbo igwe kwụ otu ebe?
Ọ bụ ezigbo ndị mbidoigwe kwụ otu ebe. Enweghi ya nke ukwuu n'ihi na eji eji ọkụ elekere aluminom. Ihu ihe ihu na-arụ ọrụezimaka ọnụahịa ahụ.
Mongoose ọ bụ akara igwe kwụ otu ebe?
ỌfọnMongoose igwe kwụ otu ebebụ aha ọjọọ maka ịme nnukwu ụlọ ahịaanyịnya igwema ọ bụ ụlọ ahịa ngalabaanyịnya igwe. Ha mara nke ọmaikalaa azụ n'ụbọchị karịsịa maka BMX. Ihe dị n’etiti ha na njedebe nke a na-ahụghị na Walmart bụ ezigbo azụta yabụ zuru ike ebe ahụ. Naanị zere ha ma ọ bụrụ na ị na-achọ ezigboigwe kwụ otu ebe.23.03.2018
Ihe mongoose ahụ na-akwụsị igwe kwụ otu ebe?
Ejiri aluminom zuru ezu, nke a nwere ike ịnya ịnyịnya na-enye ezigbo njem na-achịkwa nke na-egosi ihe dị mkpa nke Element, Shimano gearing, SRAM twist shifters, and front & amp; n'azụ diski brek. Ngwaahịa Atụmatụ Aluminom nkwusioru etiti maximizes nkasi obi & nkwupụta ụda; arụmọrụ mmewere Suspension ndụdụ smoothes
Kedu ụdị etiti mongoose Maxim igwe kwụ otu ebe nwere?
Onweghị ihe ọ nweghị ike ime na Mongoose ya. 24-Inch Mongoose Maxim alluminom zuru ezu igwe kwụ otu ebe na-enye ọmarịcha na-achịkwa ịnyịnya na okpokoro nkwụsị na ndụdụ ihu n'ihu. Enwere ike ịgba ịnyịnya ígwè a n'ụzọ dị mfe n'ọtụtụ ebe dị iche iche na Shimano gearing na SRAM na-agbanwegharị mgbanwe na-eme ka ikuku a gbanwee.
Olee ụdị brek ndị mongoose anyịnya igwe nwere?
Mongoose anyịnya igwe kwadebere n'ụzọ nke ọma Shimano Alivio Chainset, ndị na-agbanwegharị. Ugwu igwe Mongoose kachasị mma nke nwere egwuregwu egwuregwu Hayes Dyno na-enye nchebe megide ihe egwu. Oge ụfọdụ ndị na - agba ịnyịnya na - ekwu na enweghị ike ịkwụsị ya.